NYI LYNN SECK 18+ DEN: ထက်ထက်မိုးဦး တကယ်ပဲ မလွန်ဘူးလား
Posted by NLS at 5/26/2010 09:35:00 PM
73 Responses to “ထက်ထက်မိုးဦး တကယ်ပဲ မလွန်ဘူးလား”
(ဆရာဝန်လုပ်တာ လူနာ အသက်ကယ်ချင်လို့ မှန်တယ်၊ ဒာပေမယ့် ဆရာဝန်လုပ်တာ သူ့ဝာသနာနဲ့ သူ့အရည်အချင်းကြောင့်ပာ။ ဆရာဝန်လုပ်ရင် ဆေးကုရမယ် အသက်ကယ်ရမယ် ဒာက သူ့အလုပ်ပာ။ ကျေးဇူးရှင်လို့ ဘယ်လိုမှ လက်မခံပာ။ ကျောင်းဆရာ အလုပ်လည်း ဒီလိုပာပဲ။ စာသင်တာ ထိန်းကျောင်းတာ လမ်းညွှန်ပြတာ ဝာသနာပာလို့ ကျောင်းဆရာ လုပ်တယ်။ သူ့အလုပ်က စာသင်ရမယ်၊ တပည့်တွေကို မှန်ကန်တာ သင်ပေးရမယ်။ ဒာက ဆရာတစ်ယောက် အလုပ်ပာ။ ဒာကို ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေကြတာ ကျွန်တှောကတော့ လက်မခံပာဘူး။ ဒီအတွက် ဆရာတွေ ကျေးဇူးကိုကို စှောကားတဲ့ကောင်လို့ ပြောရင်လည်း ခံပာတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် သူ့အလုပ်သူလုပ် ကျေပွန်အောင် လုပ်ကြရမယ့် ကိစဿစပဲ ဖြစ်ပာတယ်။)
(ပရိသတ်ကြီးအတွက်၊ ပရိသတ်ကြီးက တို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးပာ စတဲ့ စကားတွေ ပြောတဲ့ အနုပညာရှင်ကို လုံးဝကို အထင်မကြီးပာဘူး။)
(သူလည်းလေ လောကီသားပေမို့ ဒောသကို ချွန်းမအုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ဒာမျိုး လက်ပာသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒာပေမယ့် ဒာဟာ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ သူ့ကိုယ်သူ လက်မခံသရွေ့ ကျွန်တှောကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးဘက်က မရပ်တည်နိုင်ပာဘူး။)
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရသမျှမှာ ဒီ post ပဲအကောင်းဆုံး။
vote လုပ်ခိုင်းတဲ့ post တုန်းကတောင် ဘာလို့ အပိုတွေ အချိန်ခံရေးနေသလဲ တွေးမိသေးတယ်။
ဒီ post က စကားလုံးတိုင်း၊ စကားလုံးတိုင်းကို တလုံးမကျန် ထောက်ခံတယ်။
ဆရာ လူထုစိန်ဝင်းလည်း ဒီ post မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ စကားတစ်ခွန်းကို ကန့်ကွက်တယ်။ နောင်လာမယ့် သတင်းထောက်တွေကို အားထားချင်တာနဲ့၊ မင်းသား မင်းသမီးတွေ အပြောမခံချင်ရင် အပြောမခံရအောင်နေပေါ့ဆိုတာကတော့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ လူကြီးပြောရမယ့် စကားကို မဟုတ်ဘူး။
နှစ်ဘက်လုံး နစ်နာတဲ့ကိစ္စမှာ တဘက်ဘက်ကိုမှ ပင်းပြီး ရေးရမယ့် ကိစ္စကို မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပိုင်း သူ့ပရိသတ်က ဆက်ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ၊ သူ့အနုပညာကြောင့် ဆက်လက်ခံတာ မခံတာက တပိုင်း၊ ခုကိစ္စကို ထောက်ခံပြီးရေးသင့် မရေးသင့်က တပိုင်းပဲ။
ရီတာလေး ကွ တိုတို အရှည်ကြီးရေးရလို့ လက်ညောင်းရကျိုးနပ်တယ်
နောက်တခု vote လုပ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်လို့... ကိုယ့်အနေနဲ့ နှစ်ယောက်လုံး မှားတယ် လို့ မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ vote ကိုတော့ ဘာမှ မပေးခဲ့ဘူး။
မလိုပါဘူး ရီတာလေး တိုတို သဘောပေါက်တယ်
၂ယောက်လုံး သောက်သုံးမကျလိုက်တာနဲ့ နွေးထွေးနေသင့်တဲ့ လောက ၂ခုက ပြဿနာတွေရှုပ်ရတယ်။ ကျွန်တော်သာ အာဏာရှိရင် မရှင်းတော့ဘူး။ အဲ့ဒီ၂ ယောက်ပဲ ခေါင်းဖြတ်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်။ မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ မေ့များနေကြပြီလား မသိဘူး။ ခေတ်မှီတာနဲ့ ရိုင်းစိုင်းတာကို ရောချနေကြသလိုပဲ။ (သိပ်တတ်လို့မဟုတ်ပါ၊ အသည်းယားလွန်းလို့ လျှာရှည်မိတာပါ။ )
ကျေးဇူးအတင်ခံချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်မှာဒီအတွေးမျိုးရှိတာသိလိုက်ရလို့ အံ့သြမိတာပါ။
ရိုးရှင်းတဲ့အတွေးဟာ တစ်ခါတစ်ရံ နိမ့်ကျတတ်ပါသလား။
အဆင့်မြင့်မြင့် ရိုင်းစိုင်းခြင်းတွေကြားမှာ ဘောင်မ၀င်ဘူးဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ကျွန်တော် စာမတတ်ပါဘူး။
ပို့စ်ကို အစပိုင်းမှာ တစ်လုံးမကျန်ဖတ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ထင်ထားတာတွေ ရေးထားလို့လားမသိဘူး၊ တိုက်ဆိုင်နေတော့ ၊ကျော်ကျော်ဖတ်ရင်း ရိတပေးတဲ့ ကွန့်မန့်ကို ရောက်သွားတယ်။ ကွန့်မန့်တစ်ခုကို မြင်လိုက်ရတော့ မျက်လုံးနည်းနည်းပြူးသွားတယ်။ ဟုတ်မလားဆိုပြီးတော့ ကျော်ဖတ်မိတဲ့နေရာတွေကို ပြန်ဖတ်လိုက်မိတယ်။ ကိုနေလင်းဆက်ရေ.... ဆရာကြီး လူထုစ်ိန်ဝင်းက အဲလိုပဲ ပြောခဲ့ရင်.. ရိတပြောသလိုပဲ လူကြီးမဆန်လိုက်တာလို့ပဲ ပြောချင်တယ်။ တခါတလေ လူငယ်တွေအတွက်ဆိုပြီး ဆရာကြီး ရေးနေတဲ့ ဆောင်းပါးတွေအတွက် ရင်လေးမိတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သူ့ရပ်တည်မှုကိုမှ ဆရာကြီးတို့လိုလူမျိုးက နားလည်မှုမပေးနိုင်ရင် ယခုခေတ်ကမ္ဘာကို ရွာကြီးလို့ပြောနေရင်း ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရောထွေးယှက်နွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ မွေးဖွားလာမယ့် လူငယ်တွေရပ်တည်မှုကို နားလည်မှုမပေးနိုင်ရတော့ ခက်သားလား။
ဆောရီး.. ကျောင်းမှာကတည်းက ညီလင်းဆက်ကို နေလင်းဆက်လို့ ခဏခဏမှားခေါ်နေမိတာ။ အခုထက်ထိ... ခွင့်လွှတ်ပါ
Ko Nyi Lin Seck, you are straight forward and thanks for statistic that survey is useful for sociology analysis in future.
I do not surprise on Saya Ludu Sein Win's comment by his nature of outspoken and self-defense to his profession.
However, I got amazing with Saya Mg Wun Tha on his favoritism different from an editor of reputable Thinker magazine.
And, you might get additional critics on your attitude of 'Saya' deviated from source topic.
လူထု ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ယူပြီး ဆရာ လူထုစိန်ဝင်းက ဒီလိုပဲ ပြောတယ် ဆိုရင် လူထုကို သူက ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပဲ “ မေးချင်ရာ မေးမယ် ပြန်ကို ဖြေရမယ် “ ဆိုတဲ့ ဂျာနယ်လစ် အတန်းအစားတွေကို လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ အားပေးနေတာ လို့ပဲ မြင်တယ်။
ထားတော့. . ထားတော့. . .
အဲဒီ ဂျာနယ်လစ်လေးကိုပဲ ဆရာ လူထုစိန်းဝင်းကို ထိုကဲ့သို့သော ပရိုက်ဗစီ မေးခွန်းတွေကို မေးခိုင်းရင် ဆရာ လူထုစိန်ဝင်း ဘယ်လိုများ နေမလဲဗျာ။
သူ့ပြီးရင်တော့ . . . .နောက်က တခြား သူတွေပေါ့. . ရှိပါသေးတယ်။
ဟဲဟဲ. . ကျနော်ထင်ပါတယ် ၃၀၂ ကို ( က ) နဲ့ ဖွင့်ထားရမယ် ထင်တယ်။
** ကျနော် ထက်ထက်မိုးဦး ပရိတ်သတ် မဟုတ်ပါ။ **
ညီလင်းဆက် ရေးတာနဲ့ ရီတာရဲ့ ကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ရေးချင်စိတ် ပေါက်သွားပါတယ်။
လူတွေ အားလုံးဟာ ကိုယ့်ဝါသနာအရ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်မှာ တာဝန်ကျေကျေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာအထိ လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့. ဝတ္တရားအရ လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ ဝါသနာအပြင် စေတနာနဲ့ အနစ်နာပါ ခံပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေ လောကမှာအများကြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပရဟိတအလုပ် လုပ်နေသူတွေကို သိမ်းကြုံးပြီး ပြောတာတော့ သိပ်ကို တဖက်သတ်ဆန်လွန်းသွားပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ရီတာတို့ ညီလင်းဆက်တို့လို အတွေးအခေါ် ဆန်းသစ်ချင်သလိုလိုနဲ့ အတွေးကြောင် အယူအဆကြောင်သူတွေ များလာရင်တော့ မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် ရင်လေးစရာ ဖြစ်နေပါပြိ။.
လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းပါဘူး။ အပြစ်ကင်းသူဆိုတာ ဘာမှ မလုပ်ပဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသူတွေမှာပဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ တခါမှားရုံနဲ့ လူဆိုးလို့ မပြောနိုင်သလို တခါကောင်းတာလေး လုပ်ရုံနဲ့ လူကောင်းလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။
လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးပြုသူကိုသာ လူကောင်းလို့ ခေါ်နိုင်ပြီး၊ အကျိုးယုတ်စေသူကို လူဆိုးလို့ သတ်မှတ်ရမှာပါ။
ကိုယ်ပြောချင်တာ ကိုယ်သတ်မှတ်ချင်တာကို အတင်းကြီးဆက်စပ် ဆွဲယူနေတာကိုက မကောင်းတဲ့ အကျင့်ပါပဲ။
ဒီကိစ္စမှာ နှစ်ဖက်စလုံး အလွန်ပါဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပါးရိုက်လိုက်တဲ့အမှားတခုကြောင့် ထက်ထက်မိုးဥိးကို လူဆိုးလို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ သူကောင်းခဲ့တာတွေ အများကြီးရှိခဲ့လို့ပါပဲ။
အဲဒီလိုပါပဲ သတင်းထောက်ကလဲ အတွေ့အကြုံမကြွယ်ဝသေးလို့ မမေးသင့်တာ မေးမိတာကိုလဲ အပြစ်တင်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နောင်မှာ ဒီလို အမှားမျိုး မလုပ်ဖို့ သတိထားမိသွားစေမှာပါ။
တကယ်တမ်း မှားနေတာက ထက်ထက်မိုးဦးဖက်လိုက်ပြီး အင်တာဗျူးသူတွေ၊ ပို့စ်တင်သူတွေ၊ စီစစ်ရေးပိတ်ပင်တဲ့လူတွေနဲ့ သတင်းထောက်ဖက်ကနေပြီး ရန်တွေ့နေတဲ့လူတွေပါပဲ။ သတင်းထောက်ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ်က ဆောင်းပါးဖြုတ်လိုက်တာကလဲ သူရဲဘောကြောင်ရာ ကျနေပါတယ်။
အမှားတကာ့ အမှားဆုံးကတော့ ညီလင်းဆက်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ မဲကောက်ယူတဲ့ ပေါကြောင်ကြောင် အတွေးအခေါ်ပါပဲ။
ပရဟိတ လုပ်နေသူတွေကို သိမ်းကြုံး အပြစ်မဆိုပာဘူး ခင်ဗျ။ ပရဟိတ ဆိုတာကလည်း ဝာသနာနဲ့ စေတနာ ပာမှ ရတာမျိုးပာ။ မာသာထရီဇာဟာ ပရဟိတ လုပ်ရာမှာ သူအနစ်နာခံပြီး လုပ်နေတာလို့ လုံးဝလုံးဝ တွေးခဲ့မှာ မဟုတ်ပာဘူး။ သူ့စိတ်ထဲက လုပ်ချင်လို့ကို လုပ်နေတာ။
နာသုံးနာမှာ ဝာသနာနဲ့ စေတနာကိုတော့ မပြောလိုပာဘူး။ ဒီလို အလုပ်တွေဆိုတာ ဒီနှစ်ခု မပာဘဲ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရပာဘူး။ အနစ်နာ ဆိုတာကို အနစ်နာခံပြီး လုပ်နေရတယ်လို့ မြင်ရင် အဲဒီအလုပ်ဟာ မအောင်မြင်နိုင်ပာဘူး။ တကယ်တော့ အနစ်နာဆိုတာ လူနှစ်ယောက် ယှဉ်လိုက်ရင် ကိုယ်က အနစ်နာခံပေးတာကို ပြောတာပာ။ တပည့်တွေအတွက် ဆိုရင် ဆရာက အနစ်နာ ခံတာမျိုးကို အနစ်နာ လို့ ခှောပာတယ်ဗျ။ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဇှောလင်းနဲ့ ခင်သီတာထွန်း ထင်ပာရဲ့ ဆရာက တပည့်အတွက် အနစ်နာခံပေးတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခု သွားပြီး သတိရမိပာတယ်။ ဒာမျိုးကို အနစ်နာခံတယ်လို့ ခှောပာတယ်။
ဒီသုံးခုမှာ နှစ်ခုက တွဲနေတတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။
တချို့က ဝာသနာနဲ့ စေတနာပာတယ်၊ အနစ်နာတော့ မခံတတ်ဘူး (ဥပမာ- ကိုယ်ကျိုးထိမှာ စိုးရိမ်တတ်သူမျိုး)
တချို့က၊ ဝာသနာမပာဘူး ဒာပေမယ့် စေတနာနဲ့ အနစ်နာ ခံတတ်တယ် (ဥပမာ- မိဘကြောင့် ဆရာဝန် ဖြစ်လာရသမျိုး)
ဒီနှစ်ခု ထားနိုင်တဲ့သူတောင် အတှော ရှားပာသေးတယ်။ ဒီသုံးခုစလုံးကို စိတ်ပာလက်ပာ ထားနိုင်သူတွေကိုမှ နာသုံးနာနဲ့ ပြည့်စုံသူလို့ ခှောနိုင်ပာတယ်ခင်ဗျ။
ငာတို့ အနစ်နာခံပြီး ဒီလိုအလုပ်တွေ လုပ်နေတာပဲဆိုတဲ့ အဓိပဿပာယ်မျိုး သက်ရောက်စွာ တွေးနေကြတာကိုတော့ ကျွန်တှောကလည်း အရမ်းကို အံ့ဩမိပာတယ်။
ညီလင်းဆက် ပြောသလို မီဒီယာ ပရိုက်ဗေဆီ နဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ ဘာဆိုင်သလဲတော့ မသိဘူး အမှန်ကဆိုင်မယ့်ဆိုင် ကျင့်ဝတ် နဲ့ ဆိုတော်သေးတယ် ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲမသိဘူး ရီတာ အဲဗားတင်းကတော့ မယားငယ် တုံးပိသလိုဘဲ စွပ်ထောက်ခံနေတာဘဲ အဲဗားတင်းဆိုတော့ ထက်ထက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ နေမှာပေါ့ အဲဗားတင်းနေတော့ ကောင်းကင်လောက် ကျယ်တာပေါ့ ကိုက်ပါ့ ဘလော့ title နဲ့ ရီတာ အဲဗားတင်း ကောင်းကင်
ပထမပိုစ့်မှာ ဟိန်းလတ်တို့ ၀င်းငြိမ်းတို့ကို သတိရတယ်တဲ့ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲနှစ်ကောင်များ သတိရနေသေးတယ်
ညီမက ထက်ထက်မိုးဦးဆို ကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်၊ မကြိုက်ဘူးလည်း မဟုတ်။ သူ့ဘာသာ တီဗီထဲနေသလို ကိုယ့်ဘာသာ အပြင်မှာနေတာပါပဲ။
ဒီကိစ္စ အသံဖိုင်ပါတဲ့သတင်းကို ဖတ်ပြီးချိန်မှာ အပြောတင်စီးတဲ့ သတင်းထောက်ကို စိတ်ပျက်ပြီး ထက်ထက်မိုးဦးကို ပိုသနားမိပါတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦး အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိ ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာ အသံဖိုင်အရှေ့ပိုင်းက မေးခွန်းတွေဖြေပုံကို ဖတ်ကြည့်ရင်း စာစာနာနာတွေးမိပါတယ်။ သူကြိုးစားဖြေတာတွေဟာ မေးခွန်းတွေရဲ့ထိုးဆွမှုကို မကာကွယ်နိုင်တော့ဘူး။
ရိုက်မိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တရားစွဲတာတွေ တစ်ဖက်သတ် ဝိုင်းရေးသားဝေဖန်တာတွေ မြင်လာတဲ့အခါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်စိတ်ထဲ ဘာတွေဖြစ်သွားသလဲ... မှန်းကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
(ပရိတ်သတ်ဆိုတာ ခံစားစာနာနိုင်တဲ့သူပါမယ်။ ဥပဒေအတိုင်းကြီး လိုက်တွေးချင်မှတွေးမယ်။ Law is without passion မဟုတ်လား)
နောက်တော့ ထက်ထက်မိုးဦးက ဧရာဝတီအင်တာဗျူးမှာ စာပေစိစစ်ရေးကို မကြာခဏ စာတင်ရတယ် ပြောထားတယ်။ သူ့မှာ ဖြေရှင်းစရာနည်းဆိုလို့ သူများကရေးလိုက် သူကစာသွားတင်လိုက်နဲ့ ရွေးစရာကုန်နေပြီလို့ မြင်ပါတယ်။ သူ အပြောခံ အရေးခံနေရတာ ကြာပြီ။ ဒါကြောင့် စာပေစိစစ်ရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ဧရာဝတီကိုပဲ စကားပြန်ပြောတာလို့ထင်ပါတယ်။
ဂျာနယ်တွေဘက်က ခုလိုဝိုင်းပြောနေတာထက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးနဲ့ ဂျာနယ်တွေဘက်က ခေါ်ပြီး နှစ်ဖက်လုံးကို စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးတာကတော့ အဖြစ်သင့်ဆုံးပေါ့။
စာနယ်ဇင်း နဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဆိုတာ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ လူနာလို တစ်ဖက်ထဲက ကျေးဇူးမျိုးတောင် မဟုတ်ပါဘူး။
အခွင့်အရေးယူပြီး ဖိထောင်းတာ၊ အချင်းချင်း ကာကွယ်နေတာတွေက မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Stats တွေ ကြိုးစားယူကြည့်တာက လုပ်သင့်ပါတယ်။
မီဒီယာက ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျသည် လူတွေဆီကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရောက်သလဲ သိရတာပေါ့။
သူများကို မှားတယ် မှန်တယ် ပြောဖို့ရာ ညီမက ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။
the quote was supposed to be "Law is reason free from passion"
ထက်ထက်မိုးဦးသတင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ သုံးသပ်ချက်ကတော့
အရင်ဆုံးမှားတာက သတင်းထောက်ပါ။ သူများကို ဖြေရကျပ်တဲ့ ပါဆင်နယ်တွေ ကို ထိခိုက်ပြီး စိတ်ဆိုးစရာမေးခွန်းအများအပြားကို မေးတာပါ။
တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလို ဆက်တိုက်မေးတော့ စိတ်မဆိုးဆိုးအောင် လုပ်နေသလိုပါပဲ။
အဆိုးဆုံးကတော့ ကလေး ဆုံးသွားတာကို မေးတဲ့ မေးခွန်းက စာနာထောက်ထားပြီးမေးတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။
(Larry King လဲ အဲလိုမေးခွန်းတွေ အများကြီးမေးတာ မတွေ့ဖူးဘူး။ မေးရင်လဲ လူကို မဖြေဖြေချင်အောင်ပဲ မေးတယ်။ )
ဒုတိယမှားတာက ထက်ထက်မိုးဦး။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်လို့။
- သတင်းထောက်မှားတာကို လုံးဝလက်မခံဘဲ ထက်ထက်မိုးဦးကိုပဲ တစ်ဖက်သက် အပြစ်ပုံချတာ။
- ဂျာနယ်လစ်ဆိုတာမေးချင်ရမေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီး အသည်းအသန်ကာကွယ်နေတာ။ ( အင်တာဗျူးဂျာနယ်လစ်တွေကို အထိန်းအကွပ် မရှိအောင်လုပ်နေသလိုပဲ။)
- ပရိတ်သတ် သိချင်လို့ပါဆိုပြီး ပရိတ်သတ်ကို ဆွဲထည့်တာ။
- သူ့အနုပညာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ Personal Life ကိုထောက်ပြပြီး အပြစ်ပြောတာ။
- ထက်ထက်မိုးဦးကို သနားတဲ့လူတွေကို သတင်းထောက်တွေဘ၀ နားမလည်းဘူးလို့ပြောတာ။
ထက်ထက်မိုးဦး လူကြီးကို ပြောပြီးအကာအကွယ်ယူတာ ကတော့ အပြစ်မပြောလိုဘူး။ ဒါက လူ့သဘာဝပါ။ လူတွေက ကြောက်တတ်ကြတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဒုက္ခ အရောက်မခံချင်ကြဘူး။
ဒီပြသနာကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တောင်းပန်းပြီး ကျေအေးဖို့ပဲ။
အမှန်ကတော့ မြန်မာပရိတ်သတ် က personal အတင်းအဖျင်း ဆိုပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ် (မငြင်းကြေး) အင်တာနက်သုံးနေသူတွေ ကွန်မင့် ပေးသူတွေက နည်းနည်းတော့ educated ဖြစ်နေသူများတော့ ပါဆင်နယ်စိတ်မ၀င်စား ဘူးပြောကြမှာပေါ့ တကယ့် မြန်မာလူထု ကြီးက အတင်းအဖျင်း မှအတင်းအဖျင်းပါ ထက်ထက်မိုးဦး ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာကို ထက်ထက် ဘယ်ကားမှာ ဘယ်လို ပြောင်မြောက်အောင် အိုင်တင် ကောင်းပါတယ် ဆိုတာထက် ပိုစိတ်ဝင်စားတယ် မယုံရင် ရွာတရွာသွား မင်းသား မင်းသမီး လင်ကွာ မယားကွာ ရည်းစားကွဲ ရန်ကုန်တို့ မန္တလေးထက်ပိုသိတယ် ၀က်ဆိုက်တွေမှာ မင်းသား မင်းသမီးအတင်းအဖျင်းတို့ မင်းသား မင်းသမီး တွေ နာမည်တပ်တဲ့ အပြာကားတို့ဆို ဘယ်သူမေးမေး ကြည့်ပြီးသားချည်း ခုမှ လူတော်တော်များများက သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်နေကြတယ်
သတင်းထောက်ကလဲ မှားတယ် ကာလံ ဒေသံ ဇလုံ ပန်းကန် တွေဆိုတာမကြည့်ဘူး သူမေးခြင်တာတွေ အတင်းမေး နန္ဒသိန်းဇံရဲ့ မှန်သောစကားဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်တယ်ဆိုလားဘာလား စာအုပ် ကို သတင်းထောက်တွေ ပေးဖတ်ရမယ် ဘုန်းကြီးတောင် အခြေအနေမသိဘဲ ပြောရင် အထုခံရတတ်တယ်ဆိုတာ သိအောင်
ပရဟိတ လုပ်ပါတယ်ဆိုမှ အနစ်နာမခံဘဲ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဝါသနာအရင်းခံပြီး၊ စေတနာထပ်ဆင့်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံမှ လုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - ကိုကျော်သူလုပ်သလိုမျိုး တော်ရုံတန်ရုံလူ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ပါးစပ်ပြောလွယ်သလောက် တကယ်လက်တွေ့လုပ်တာ သိပ်ခက်ခဲပါတယ်။
မာတာထရီဇာလည်း ဆင်းရဲသားတွေ အတွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ အနစ်နာခံပါတယ်လို့ မကြွေးကြော်ခဲ့ပါဘူး။
ဟုတ်ရင်ကျော်၊ ပုပ်ရင်ပေါ်ဆိုသလို ကာယကံရှင်များက မကြွေးကြော်ပေမဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက အနစ်ခံတာ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တာ၊ စာရိတ္တမကောင်းတာ၊ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းတာ၊ ဆရာကြီးလုပ်တာ၊ လူတတ်လုပ်တာ အကုန်မြင်လို့ ဝိုင်းပြီး သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
မည်သူမဆို ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ဟာကိုယ်တော့ အတော်အတတ် အကောင်းချည်း မြင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က သတ်မှတ်တာကိုတော့ ငြင်းပယ်လို့ မရပါဘူး။ မိမိလုပ်ရပ်က အများကို မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်လုပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိခိုက်နေရင်တော့ လူဆိုးစာရင်းဝင်သွားတာပါပဲ။
အဲဒါကို ညီလင်းဆက်သဘောပေါက်ရင် ပြန်လှန်ငြင်းခုံစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။
အတွေးကြောင် အရေးကြောင်များ ရှောင်ရှားနိုင်ပါစေ။
ဘယ်သူမှားလဲ ဘယ်သူမှန်တယ် ဆိုတာ ကို စိတ်မ၀င်စား ဖူး.... ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စဟာ အတော် လေး ကို ပဲ ရပ်ကွက်ထဲ က အဖြစ်အပျက် တစ်ခုလို အကျည်းတန် ရုပ်ဆိုးတယ်..
အဲဒါထက် ပြောချင်တာ က ဆရာဝန် နဲ့ ဆရာ ကိစ္စ..
ခင်ဗျား ပြောပုံ အရဆို ရင် သူတို့ တာဝန် သူတို့ လုပ်တာ ဒီအပေါ် မှာ ကျေးဇူးတင် နေစရာမလို ဖူး လို့ ဆိုလိုတာ ပေါ့ ဗျာ...
အဲဒါ ဆို ခင်ဗျားကို ခင်ဗျားမိဘတွေ ဒီအသက်အရွယ် ရောက်လာ အောင် ကျွေးမွေး လာတာ လိုအပ်တဲ့ ပညာ တွေ သင်ပေး လာ တာ၊ ခင်ဗျား လိုအပ်တာ တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးလာတာ တွေ က သူ့ တို့ တာဝန် သူတို့ လုပ်တာ ကျေးဇူးတင် စရာ မလိုဖူးပေါ့ နော်.........မိဘ နဲ့ ဆရာ သမား ဆို တာ ကျွန်တော် တို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ မှာ တကိုင်းထဲ ထား ထားတာ ပါ..... ဒါပေမယ့် သူတို့ က ဆရာမို့ မိဘ မို့ အမြဲ မှန်နေတယ် လို့ မဆိုလိုပါ ဖူး... သူတို့လဲ ပုထုဇဉ် မို့ အမှားတော့ ရှိနိုင်တာ ပေါ့... သူတို့ မှာ ရှိတဲ့ အမှားသက် သက် သူတို့ ကျေးဇူးက သက်သက်... ခွဲခွဲ ခြားခြားမြင်တတ်ပါ စေ.......
ပထမလူ = ဂျာနယ်လစ်က စမှားတယ်။
ဒုတိယလူ = ထက်ထက်မိုးဦးက လိုက်မှားတယ်။
(ထက်ထက်ကို ရွှေစင် ကြော်ညာမှာတည်းက ကြိုက်တယ် သရုပ်ဆောင်တာကို)
မြန်မာပြည်က ဂျာနယ်အယ်ဒီတာတွေ၊ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေ ဘာလဲ ဆိုတာ အခုမှ သိရတော့တယ် အဟားဟား...
အနုပညာရှင် သရုပ်ဆောင်များလဲ နှာဆေးသံများ ကြားရတယ် .. ဟေ..ဟေ့။
ပြည်သူကို မျက်စိနားဖွင့်ပေးရမယ့် လူတွေက မလှိမ့်တပတ်နဲ့ ဘယ်သူက အလေးနက်ထားမလဲ..
ဒီကိစ္စမှာ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့သတင်းထောက် ရန်ဖြစ်တာကပါစင်နယ်.. ရန်တိုက်တာက ဂျာနယ်လစ်စင်.. မထင်မှတ်တဲ့ ရလဒ်က အရှက်ကို ဖြန်းဖြန်ကွဲသူများ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်..
ဘလော်ဂါ နှာဆေးနေချင်ပေမယ့် မနေသာတော့ ပြောရတာပါ့ ... ပန် .ပန်.ပန်. ရင်မှာ စေတနရာ အပြည့်ဝပင် ဘလော်ဂင်.. :P
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ပထမဆုံးအချက်ကတော့voteကောက်ခြင်းကို သဘောတရားအရထောက်ခံချင်တာပါ။ ဒါဟာအချီးနှီးအချိန်ဖြုန်းတဲ့လုပ်ရပ်လို့လည်းကိုယ်မမြင်ပါဘူး။ အရာရာတိုင်းမှာaccuracy (တိကျမှုမှုနဲ့မှန်ကန်မှု)ဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဖြေမှန်နဲ့နီးစပ်တဲ့
ကောက်ချက်တခုကိုချနိုင်ဖို့ဆိုတာ ဒီလို voteအလေ့ထမျိုးဟာအလွန်လိုအပ်ပါတယ်။
လူတွေဟာ နှုတ်က သို့ တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပြောရာမှာ မိမိစိတ်ကိုခြွင်းချန်လိုချန်မယ်။ voteဆိုရင်တော့ အားနာစရာမလို စိတ်ထဲရှိတာ ကောက်နှိပ်လိုက်ရုံမို့ပါ။
(လူသိမခံချင်ရင် ဂျာနယ်တွေမှာ အထည့် မခံချင်ရင် ကိုယ့်ဘက်က သန့်ရှင်း စင်ကြယ်အောင် နေပာ)ဆိုတာကို အလွန်အံ့သြအထင်သေးမိကြောင်းပါ။ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက် ဆိုတာ လိုက်နာဖို့ခဲယဉ်းပေမဲ့။
ထက်ထက်မိုးဦးအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ တကယ်တော့ သူ့ပါဆင်နယ်လ်ကိုရေးခြင်းဟာ သတင်းမီဒီယာတခုအတွက် ရောင်းအားတိုးသွားစေပေမဲ့ သတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အတင်း သို့ အဖျင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလက်နက်လိုစွဲကိုင်ပြီး ဒီလိုစကားပြောတယ်ဆိုရင်ဖြင့် သတင်းသမားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်။
တတိယအချက်က Eleven Mediaဟာ မိမိရေးတင်ထားတဲ့စာမူအပေါ် တက်တဲ့ အဆိုပြုချက်တွေကို ထောက်ခံတာတွေလောက်ပဲလက်ခံပြီး မထောက်ခံတာတွေကို မတင်ဘူးဆိုတာကိုလည်း မှန်ခဲ့သည်ရှိသော်(အတိကျမိမိကိုယ်တိုင်မသိသည့်အတွက် ယင်းစကားလုံးအားသုံးစွဲပါသည်။) ဒါဟာ မီဒီယာလက်နက်ကိုကိုင်စွဲထားသော တဖက်သတ်ဆန်သည့် မတရားမှုပြုလုပ်ခြင်း တမျိုးပါပဲ။
ဒီနိုင်ငံမှာ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား၊ ကျေးဇူးစကား အတှောပြောကြတယ်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ဟာ ကိုယ်ဝာသနာပာလို့ ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အယူအဆပဲ ဖြစ်သင့်ပာတယ်။
ဒာကို ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေကြတာ ကျွန်တှောကတော့ လက်မခံပာဘူး။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် သူ့အလုပ်သူလုပ် ကျေပွန်အောင် လုပ်ကြရမယ့် ကိစဿစပဲ ဖြစ်ပာတယ်။(ကိုညီလင်းဆက်အဆိုပါ)
ဒါပေမဲ့. ဝတ္တရားအရ လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ ဝါသနာအပြင် စေတနာနဲ့ အနစ်နာပါ ခံပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေ လောကမှာအများကြီး ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပရဟိတအလုပ် လုပ်နေသူတွေကို သိမ်းကြုံးပြီး ပြောတာတော့ သိပ်ကို တဖက်သတ်ဆန်လွန်းသွားပါပြီ။ (ဒါက မ/ကို မီလျှံနာအဆိုပါ)
နှစ်ဦးလုံးအဆိုကိုကြားကနေ ကိုယ့်အမြင် ၀င်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါ။ နှစ်ဦးလုံးမမှားဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးမှာ ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာကိုကြားကကြည့်သူက ပိုမြင်ရပါတယ်။
ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့အရိုးစွဲသတိကြီးကပ်နေတဲ့အခါ ဥပမာ ဆရာမှားတယ်လို့ထင်လည်း ပါးစပ်ကမထွက်တော့ပါဘူး။ အခန့်မသင့်ရင် ကျေးဇူးရှင်ကို ခံပြောတယ် တို့ ကျေးစွပ်တယ်တို့ ဖြစ်လာမှာမို့ပါ။
ဒီ့အတွက်ဆိုချင်တာက ကျေးဇူးနဲ့အမှန်တရားကို ရောထွေးမပစ်သင့်ခြင်းပါ။
အရှေ့တိုင်းမှာအဲလိုစိတ်လွှမ်းမိုးမှုများခြင်းကြောင့် နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ရှေ့ကလူရဲ့အတွေးခေါ်အယူဆကို ကျော်ဖို့မကြိုးစားတာ အလေ့ထလိုဖြစ်နေပြီး မျိုးဆက်အားဖြင့် အသိဥာဏ်ဟာ အနိမ့်ပိုင်းကိုလျှောဆင်းလို့နေပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ကြာလာလျှင် သိပ်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ်။
လက်တွေ့ဥပမာဆိုရရင် ဂျပန်ပြည်က သူနာပြုအုပ်ဆရာမကြီးကို စကားပြန်လိုက်ပေးခဲ့တုံးက ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေပါပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန်ဆိုလျှင် လူတွေဟာ အလွန်ရိုသေပါတယ်။ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင် ဆိုတဲ့အရိုးစွဲအသိနဲ့ပါ။ ဆေးရုံဆေးခန်း အထူးသဖြင့် အစိုးရဆေးရုံကြီးတွေသွားတိုင်း ထည်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ သူနာပြုဆရာမကအစ အားလုံးဟာ မာန်ချီနေသူအတော်များပါတယ်။ သာမာန်လူတန်းစားတွေဟာ မျက်စိရှေ့မှာ အဟောက်ငမ်းပဲခံနေရတာတွေအတွေ့များခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ။
ဒီမှာကတော့ ဆရာဝန်တို့ သူနာပြုတို့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာ service field (၀န်ဆောင်မှုအလုပ်)ထဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာလာစားတဲ့ဧည့်သည်ကိုဧည့်ခံသလိုပါပဲ။ သိပ်ကိုရိုကျိုးဖော်ရွေပါတယ်။ ဆေးခန်းလာပြသူဟာလည်း တနည်းဆိုရရင် ဆရာဝန်ကိုပိုက်ဆံလာပေးသူ customer ပါပဲ။ ဒီလိုပဲ အစိုးရရုံးတွေမှာဆိုရင်လည်း ဥပမာ ကိုယ်တွေ့ဆိုရလျှင် ဗီဇာသက်တမ်းတိုးဖို့ အိမ်လိပ်စာပြောင်းဖို့တို့ စသဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးတို့ဘာတို့သွားတဲ့အခါမှာ ရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုဟာ မြန်မာပြည်က ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့မခြားပါဘူး။ ဆိုရလျှင်တော့ ပြည်သူ့အခွန်ငွေကဖြစ်တဲ့လစာနှင့် ပြည်သူ့အလုပ်ကို လုပ်နေတာမို့ ပြည်သူဟာ customerပါပဲ။
customer ဆိုတဲ့သဘောကို အလေးနက်ထား ကျင့်သုံးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နေရာတိုင်းမှာ လူတိုင်းကိုယ်စီ ရပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်ဒွန်တွဲနေပြီးသားပါ။ လုပ်ရမဲ့အလုပ်အပေါ်မှာတာဝန်ကျေဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တခုက အပြန်အလှန် ကျေးဇူးတင်စိတ်ကလေး ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။
အားလုံးဟာ ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမီမို့ ကျေးဇူးတင်စိတ်ကလေးထားသင့်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်စကားသိပ်ပြောတဲ့ဓလေ့မရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလိုအတွေးဟာ အလွန် အန္တရာယ်များပါတယ်။
နောက်ဆုံးတချက်ကတော့ လုပ်ရတဲ့တာဝန်(အလုပ်)ကိုပဲ လုပ်ရမှာကိုလုပ်တာ တခုတည်းမဟုတ်ပဲ စေတနာအပြည့်ထည့်လုပ်သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်တခုက မိမိအကျိုးစွန့်ပြီး စေတနာအပြည့်နဲ့ အများအကျိုးထမ်းနေသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်လေးစာစိတ်ကလေးလည်း ရှိသင့်ပါတယ်။ သို့ငြား အမှန်တရားနဲ့ယှဉ်လာတဲ့အခါ ကျေးဇူးတရားဆိုတာကြီးနဲ့ အမှန်တရားကိုသစ္စာဖောက်ဖို့တော့မသင့်ကြောင်းပါ။
အမှန်က ကျေးဇူးတရားဆိုတာထက် ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီဆိုရင် ပိုမှန်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုကျိုးတတ်တဲ့သဘော၊ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သဘောတွေက အမူအရာနဲ့ ပြတာများပြီး ပါးစပ်က ထုတ်ပြောတာ နည်းတတ်ပါတယ်။
နာသုံးနာနဲ့ အများကောင်းကျိုးဆောင်တတ်သူ ပရဟိတလုပ်ဆောင်သူတွေကတော့ ကျေးဇူးကို မျှော်ကိုးပြီး လုပ်ဆောင်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
လပ်ပေးလပ်ယူသဘော အပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနေသူတွေသာ ကျေးဇူးတရားကို ရှေ့တန်းတင်နေကြတာပါ။
သဘောချည်းပဲဆိုရင် အပြန်အလှန်ကြေအေးနိုင်ပါတယ်။ ခုတော့ ဘေးက မီးလောင်ရာ လေပင့် ဘေးတီးသူတွေကြောင့် ပြသာနာက မကြီးသင့်ပဲ ကြီးနေရတာပါ။
ကျော်နှင်းဆီ ပြောတာကိုလည်း ကိုယ် သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒီ ခေါင်းစဉ်တွေက ကိုယ်စိတ်​ဝင်စားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေပါ။
ညီလင်းဆက်ပြောသွားတာတွေက မြှုပ်ပြောသွားတာတွေ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီ မြှုပ်ကွက်တွေကို ကျော်နှင်းဆီ ဖော်ပြပေးလိုက်တယ်လို့ ခံယူမိပါတယ်။ ညလဆ ပြောသွားတာက သဘောတရားသက်သက်ဖြစ်ပြီး ကျော်နှင်းဆီ ဖော်ပြလိုက်တာက အပြန်အလှန်အားဖြင့် ထားရမယ့် သဘောထားကို ဖြည့်စွက်လိုက်တယ် လို့ မြင်ပါတယ်။
အင်တာဗျူဟာမလေး နဲ့ အယ်ဒီတာဆိုသူများဖြေရန်..
မေး.။ ။ အင်း . လူဆိုတဲ့ အမျိုးကလည်း အတင်းအဖျင်းလေးတွေ သူများရဲ့ ပုတ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေ ကိုမှ ချည်ခြင်းတတ် ကြတတ်တော့လေ.. ညီမတို့က အပုတ်အစပ် တွေ ရှာဖွေပေးနေတဲ့ သူတွေပေါ့နော်..။
မေး.။ ။ အဲ အခုပရိတ်သတ်ကြီးက အီထပ်နေတဲ့ အပုတ်စပ်တွေထက် အပုတ်သစ် အစပ်သစ်လေးတွေ ကြားချင်တာတဲ့. ဒီတော့ ညီမရဲ့ ကွယ်ရာမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလေးတွေ ဖြေပေးနော်..။ ဆိုတော့ကာ.. ညီမက အပျိုလား အအိုလား..
မေး..။ ။ဒါဆိုရီးစားကော ရှိလား.. ညီမရီးစား နဲ့ ညအိပ်ဘူးသလား..။
မေး..။ ။ အော်... အပျိုစစ် ကလေးပေါ့.. ထားပါတော့ ညီမပဲ သိမှာပေါ့.. ဒါနဲ့ ညီမ ဒီအရွယ်ထိ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဖြေတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေ လုပ်ဘူးသလား..။
ဖြေ..။ ။ ....
မေး..။ ။ ဒါနဲ့ ညီမသိတယ်နော်.. ညီမအဖေကလေ. ညီမအမေ ကို.. အင်း ဘယ်လိုပြောမလည်း .. ဖိုမ ဆက်ဆံတယ် ပေါ့နော်.. အဲ့လိုကြီး ဆက်ဆံ ပြစ်လိုက်လို့ ညီမ လူဖြစ်လာရတာဆိုတာ ညီမလက်ခံတယ်နော်..
မေး.။ ။ အင်း.. သိချင်တာကလေ.. ညီမအမေ အခု သွေးဆုံးသွားပြီလား..
မေး..။ ။ အော်.. သွေးဆုံးသွားပြီဆိုတော့.. ညီမအဖေက ညီမ အမေကို.. ဟို လေ... ညတွေမှာ တနာကြီးကြီးနဲ့.. စိတ်လိုက်မာန်ပါ.. လိင်ဆက်ဆံတုန်းလား...
ဖြေ..။ ။.. သွားလိုက်တော့.. ဒိုးလိုက်တော့
( ပါးမရိုက်ကြေး )
မေးတဲ့သူကမေးပြီး ရိုက်တဲ့သူကရိုက် ဖွတဲ့သူကဖွ ပိတ်တဲ့သူကပိတ် ဖတ်တဲ့သူကဖတ်
တဖက်ကမခံချိမခံသာပြောလို့ စိတ်ဆိုးလို့ ပါးရိုက်တယ် ဆိုတာ သာမန်လူထုထဲမှာတော့ ဒုနဒေး ဖြစ်ရိုးဖြစ်နေမှာပါပဲ။
၁- ဒီလိုပဲ အပြန်အလှန်တောင်းပန်ကျေအေးလိုက်ကြရင်းနဲ့ ပြသနာအေးသွားကြသလို...
၂-ရုံးရောက်ဂတ်ရောက် နဲ့ ငွေကုန်စိတ်ပန်း နဲ့မှပြီးသွားတာလဲရှိမှာပဲ...
*ထက်ထက်မိုးဦးကော သတင်းထောက်ကော ကိုယ့်အမှားကိုယ်အပြန်အလှန်တောင်းပန်ကြေအေးလိုက်ကြရင် ဘယ်လောက်များ ငြိမ်းချမ်းလိုက်မလဲလေ*
Regarding with eleven media,I am not sure they are deleted comments or not. But I haveadoubt that they are voting + for their own comments and they want people to think their views are accepted by many. Their editor Wai Phyo seems too arrogant and proud of being eleven editor.He looks down and insult their fans who have different view on this case and accused those comments come from outside myanmar anti gov side.I think there was some conflict and personal hatred bet Htet Htet Moe Oo and Eleven in the past and their view became one sided.
Anyway, I like eleven media cos it can reveal good news for people and highlight about necesary thin
ကျော်နှင်းဆီလွင် ကောမန့် သဘောကျတယ်ဗျ
တကယ်တော့ ဒီပြဿနာဟာ မင်းသမီးရဲ့ မပြည့်ဝမှု နဲ့ သတင်းထောက်ရဲ့ ပါးနပ်လိမ္မာမှု၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာကြောင့် ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်တယ်…စာနယ်ဇင်းတွေက စကားလုံးအကြီးကြီးတွေနဲ့ ပုံကြီးချဲ့တယ်…တကယ်တော့ မင်းသမီးရော၊ သတင်းထောက်ရော အရှုံးထွက်တယ်…ဘယ်သူမှ မမှန်ခဲ့ဘူး...ဒီဇာတ်လမ်းကို ပေါင်းထုပ်လို့ အနှစ်ချူပ်ကြည့်လိုက်တော့ တကယ့် အမြတ်ထွက်သွားတာက စာဖတ်သူပြည်သူတွေပဲ…ဘာကြောင့်လဲ…ဒီပြဿနာအပေါ် စာနယ်ဇင်းတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက် ကို တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ပဲ… လူထုအပေါ်သြဇာရှိပါတယ် လို့ ယူဆရတဲ့ ၀ါရင့် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယာက်ဖြစ်တဲ့ လူထုစိန်ဝင်းရဲ့ တစ်ဘက်စောင်းနင်း အမြင်ကို ဖတ်ပြီး ချိန်မှာ စာနယ်ဇင်းအပေါ် ယုံကြည်မှု ကို သံသယဖြစ်သွားတယ်…အကြည်ညိုလည်း ပျက်သွားတယ်...စာနယ်ဇင်းတွေ မကြာခဏပြောနေတဲ့ အဂတိတရားကင်းတဲ့ စတုတ္ထမဏိုင် ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ အမြင်မှာ ရိုးတိုးရိပ်တိတ်တောင် မတွေ့လိုက်ရတာ သိပ်အံ့သြစရာကောင်းနေတယ်…သူတို့ရဲ့ အမြင်တွေက ကျောသားရင်သား ခွဲခြားမှုတွေပါနေတယ်….သူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်မှာ အဂတိတရားပါနေသမျှ ဘယ်လိုလုပ် ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့ စာနယ်ဇင်းနယ်ပယ် ဖြစ်တော့မလဲ…အဲဒီတော့ ဂျာနယ်တွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်တွေ၊ အာဘော်တွေအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့တယ်…ငါတို့ စာနယ်ဇင်းဘက်တော်သားဆိုတဲ့ ငါဆိုတဲ့ အတ္တပါနေသရွေ့ ဘယ်လိုလုပ်အဂတိကင်းတဲ့ စတုတ္ထမဏိုင် ဖြစ်လာနိုင်မလဲ…ဒါ ဘာမှ ကြီးကျယ်တဲ့ ပြဿနာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စမှာတောင် ရပ်တည်ချက် လွဲနေရင် မကြာမီ မှာလာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီ အပေါ် စာနယ်ဇင်းတွေရဲ့ အမြင်ရပ်တည် ချက်တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်…တနည်းအားဖြင့် စာနယ်ဇင်းတွေနဲ့၊ ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ သဘောထားတစ်ချို့ကို ရိပ်ခနဲ တွေ့လိုက် ရတဲ့အတွက် စာဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ သတင်းတွေ၊ အာဘော်တွေ အပေါ် ချင့်ချိန်သုံးသပ်ကြည့် ဖို့ အသိကလေး ၀င်လာတာက အမြတ်ထွက်သွားတာပဲ…ဒါ အဆိုးထဲက အကောင်းလို့ ဆိုရမှပေါ့……
ကျေးဇူးတွေ၊အနစ်နာခံတာတွေ ပြောနေစရာ မလိုပါ။
ငါသင်ပေးလို့တတ်တာငါ့ ခံမပြောနဲ့ဆိုတာမျိုး မပြောသင့်
တွေက ဘာမှ ကျေးဇူးတရားတွေ၊ဘာတွေထည့်ပြော
သူ့အနေနဲ့မပြောသင့်ပါ၊vote ကောက်တာကို လုပ်သင့်
တာမျိုးကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။အပေါ်မှာ မရီတာကို ရေးတာ
You areablogger. So, you blog. Nobody forces you to do it. And you said that everybody should do their job without any expectation in return, such as acknowledgement or appreciation.
If that is your opinion, why did you swear (and get angry) at those people who use your pictures of thingyan bomb explosion without your consent?
In your own words, you areablogger and blogging is what you do. So, why angry?
Ask yourself this question: why was I angry?
အရင်းရင်က ( နိုင်ငံရေး နားမလည်ဘူးဆိုပြီး ပို့စ်တခုကို ဖတ်ဖူးတယ်) စာရေးသူက ဘော်လုံးပွဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြသွားတာ...
အခုကိစ္စလဲ ဘော်လုံးပွဲနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး စဉ်းစားပါဦး..
သေချာတာကတော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကြူးလွန်သူကတော့ အနီကပ်ပါပဲ...
ရေးရင်လဲ ပိုစ့်တခုလောက်ရပါမယ် ၊ မရေးတော့ပါဘူး။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပို့စ်နှင့် မဆိုင်ဘူးဖြစ်နေရင်လဲ ခွင့်လွတ်ပါ။
ဘယ်လိုဝေဘန်ဝေဘန်..ထက်ထက်က ယောကျားယူတာ..တရားဝင်ယူတာ...တရားဝင်လိုင်စင်နဲ့သေနတ်ကို ကိုင်သုံးတာ...လိုင်စင်မရှိမရှိဘဲ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး...
ခက်တာတာက သတင်းထောက်....ဗမာပြည်မှာနေပီး အမေရိကန်လိုမေးချင်လို့မရဘူး...အင်္ဂလန်လိုမေးချင်လို့မရဘူး...အာဏာပိုင်တွေမကြာခန သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတာဘဲ..သတင်းထောက်များမေးချင်ရာမေးပါဗျာလို့ပြောတိုင်း..အမှန်ကိုမေးကြည့်ပါလား...ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာ..မေးကြည့်ကြစမ်းပါ...အမှန်က ဒီဖြစ်စဉ်အဖြစ်ကတည်းက သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေထိမ်းပေးရမှာ....ခုဟာက လျော်ကြေး သိန်းသုံးရာပေးလိုက်ယင် ပြတ်သွားမဲ့ပုံကိုဦးတည်နေတယ်ဗျာ...အမှန်ကိုပြေတာနော်...
"You areablogger and blogging is what you do. So, why angry?"..
Fairnsquare,are youa6th year old or uneducated? Your words show your lacking of knowledges, and asasilent reader, I am very upset about those morally corrupted Journalists and bloggers.
ဗမာပြည်ကသတင်းထောက် အမေရိကန်လိုမမေးနဲ့ ဆို
အထိန်းအကွပ်မဲ့မလုပ်နဲ့ .။နှစ်ဖက်ညီမျှသင့်ပါတယ် ။
ဂျာနယ်လစ်စ်လည်း ညံ့ တယ်..။အရိပ်အကဲအရေး
မေးတယ် ။ မင်းသမီးက ရိုင်းတယ် ။ မြန်မာ
ရင့်သီးရိုင်းပျတဲ့အပြုအမူပါ ။ တော်ရုံအဆင့်အတန်းက
မိန်းမတွေမလုပ်ဝံ့ ပါဘူး ။ မင်းသမီးအဖို့ လည်း နကိုယ်ဓါတ်ခံ မကောင်းချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
တကယ် ပရဟိတစိတ်ဓါတ်အပြည့်နဲ့ လူမှုရေးအလုပ်
လုပ်နေသူတွေဟာ ငါအနစ်နာခံနေတယ်လို့ တွေးနေ
ရင် ပရဟိတစိတ်သန့် သန့် ရှိသူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ 
မြင်ပါတယ် ။ကိုယ်တကယ်မလုပ်ချင်ပဲလုပ်သင့်လို့ သာ
တာကိုစေတနာသန့် သန့် နဲ့ လုပ်နေတာမှန်ရင် ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်နေရပြီပဲ..ဘာနစ်နာနေလို့ 
လဲ..။ ကျောင်းဆရာတို့ဆရာဝန်တို့ ဟာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူစာရင်းမှာပါမပါဆိုတာက အဲဒီတစ်ယောက်ချင်းအပေါ်မှာမူတည်တာပါ ။
ကျောင်းဆရာတိုင်း ဆရာဝန်တိုင်းဟာ သဘောထားပြည့်ဝနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး..။
ကျွန်မရဲ့ လွတ်လပ်သော ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါ ။
May Khine said...
<<< ဒါကတော့ ဒီနေ့ခေတ် စာသင်ခန်းတွေ နဲ့ ဒီနေ့ ခေတ် ဆေးရုံဆေးခန်း တွေကြား မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ သူတိုင်း နားလည်မယ့် ကိစ္စပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို customer လို့ သဘောထားပြီး အထူးကုဆေးခန်း ပြဖူးတဲ့သူတိုင်း ဆရာဝန်ကြီး အတော်များများရဲ့ သမားဂုဏ်ပြ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ကြုံဖူးမှာပါ။ သူတို့အချိန်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန် မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုက်သင့်သော အဖိုးစားနားနဲ့ညီမျှသော ဆေးကုသခွင့် ကို အထူးကုဆေးခန်းတိုင်းမှာတောင် customer right အနေနဲ့ မရပါဘူး။
ဆရာများလည်း ဝါသနာနဲ့စေတနာ အရင်းခံပြီး ဆရာဖြစ်နေသူက ၁၀% ဆိုရင် အလွန်ဆုံးပါ။ မစော်ကားမိ ဖို့ အဓိကကျပေမယ့် မိဘနဲ့တစ်ဂိုဏ်းထဲ ထားအပ်သော ဆရာသမားမျိုး အတော်ရှားပါး နေပါပြီ။
ဒီလိုပြောလို့ စေတနာ အရင်းခံသော ဆရာ များ သမားများ မကြုံဖူးဘူး လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အများစု နဲ့ အနည်းစု ကြားက ကွာဟချက်က တော်တော်ကြီးပါတယ်။
စာရေးသူညီလင်းဆက်ရဲ့ အရေးအသားပြတ်သားမှုကို သဘောကျတယ်။ ထောက်ခံတယ်။ စာနယ်ဇင်းဆရာ ကြီးများကို ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာလည်း သိပ်ကိုရဲရင့်တယ်။
htet htet Moe Oo hasn't fault.
Journalist shouldn't ask personal question that is affect to her mind in order to Buddish concept.
Nyi Lynn Seck..I know you haveasick in your mind about your bomb exploding photos that was published inajournal without your permission.You extended nonsense topic which can't see any benefit for readers till now.I can hear the trace of your angry sounds in your posts.I wanna suggest you should first cure your sick in your mind before making judgment other's affair.
ကိုယ့်အယူအဆကိုတင်ပြတာကို အမှန်တရားတစ်ခုကိုတင်ပြသလို မတင်ပြသင့်ပါဘူး။ ကျေပွန်အောင်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ် လို့ တင်ပြမယ့်အစား ယူဆပါတယ်လို့ ရေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ အထက်ကဖော်ပြချက်ဟာ ရာနှုန်းပြည့်မှန်တဲ့အရာမဟုတ်လို့ ပါ။
တာဝန်ကျေ ၀တ္တရားကျေသင်တာမျိုး ဆေးကုပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ့်ကို တပည့်အတွက်စေတနာ အနစ်နာနဲ့ သင်ပေးတဲ့ ဆရာတွေ၊ လူနာအတွက်ကုပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေလဲ ရှိတယ်လေ။ရှားတော့ရှားတာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် သေချာပေါက်ရှိနေတယ်။ အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာပဲ ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘူးဆိုရင်တော့ သိပ်ရိုင်းရာကျတာပေါ
ညီလင်းဆက် ရဲ့ သုံးသပ်ချက် တွေကို ကြိုက်တယ်၊၊ Porfessional personel နဲ့ client ၂ ဖက်လုံးမှာ ethics နဲ့rights ဆိုတာတွေရှိရပါတယ်၊၊ တခါလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးနဲ့ ဘဲ ဘာလုပ်လုပ် မျက်နှာ ထောက်နေရတာနဲ့ ဘဲ ဘာမှလုပျလို့ မရတော့ဘူး၊ တသက်လုံးသွားရောဘဲ၊၊ ဗမာရာဇဝင်မှာ ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ပထမနိုင်ငံတည် ထောင်တဲ့ အနော်ရထာ ကို ကုန်းပြီး ကျေးဇူးတင်နေကြတာနဲ့ သူရဲ့ ဒုစရိုက် အကုသိုလ် တွေ ဖေါ်လို့မရတော့၊ ထို နည်း၎င်းဘဲ အောင်ဇေယျ ရဲ့ဒုစရိုက်မှုတှေ စတုတ်ထနိုင်ငံထူထောင်နေတဲ့ နေဝင်း သန်းရွေ တို့ ရဲ့ဒုစရိုက်တွေ ဖေါ်လို့ မရတော့ ဘူး၊ ကျေးဇူးရှငျတှေမို့လို့လေ၊၊
ဘယ်သူမှားတယ်၊ ဘယ်သူမှန်တယ်လို့ မပြောလိုပါ....သတင်းထောက်မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် သူတို့ဆရာတွေက ဒီလို အသေးအဖွဲ တွေမေးဖို့ သင်ထားသလား၊ ဒါမှမဟုတ် သတင်းထောက်ရဲ့ စွမ်းရည်က ဒါပဲရှိသလား ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်
First of all, I never said that publishing others' work is ethical.
Second, I just pointed out that if nyi lynn sek is of the opinion that nobody should acknowledge the deed of doctors and teachers just because that's what they do, why is he angry? My personal feeling is that he is angry because he wants to be credited for what he is doing.
Last, my friend horizontal, I haven't insulted anyone (including you) here. Pls reflect on your penmanship such as "are youa6th year old or uneducated? Your words show your lacking of knowledges". Yes, you have every right to insult me or call me names if that's what you want. But we don't want others to look down on myanmar bloggers, do we? Personally, I feel that we, myanmars, need to disagree gracefully.
Btw, for the most part, I agree with what NLS said.
Let me explain you in terms of simple words. You areaprofessional, let me call youaprofessional doctor. Here isapatient, who does not pay for your medical care for no reason. How would you react him?
Let me oversimplifyalittle more. You arearich man and someone has stolen your gold. How would you call him? Thief! Right?
It's that simple. You areablogger who works with words. If there is someone who uses your words, how would you treat him? Like an honest man or likeathief?
I hope you'd understand and that's the end. Btw it was nothing personal and I didn't insult anyone. I just had to write the bitter truth honestly.
လူတွေရဲ.သဘာဝကိုက Gossip ဆိုစိတ်ဝင်စားတာပဲလေ။ ပါးသာအရိုက်မခံရဘူးဆိုရင် Interview လုပ်ပြီးထွက်လာမဲ့သတင်းကို အလုအယက်ဖတ်ကြ မှာပဲ။ သတင်းထောက်ကတော့ မေးစရာရှိတာမေးမှာပဲ။ အဲဒါသူ့အလုပ်ပဲ။
အမေးမခံချင်ရင် ကိုယ်ကမှန်အောင် နေပေါ့ ။ ဘာမှနာနေစရာ မလိုဘူး။ ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ သတင်းကိုမေးတာမဟုတ်ဘူး...အမှန်မေးတာပဲ။
"ထက်ထက်မိုးဦးသတင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ သုံးသပ်ချက်ကတော့
အဲဒီ Comment ကတော့ ဖတ်ရတာတော်တော်အဆင်မပြေတာပဲ.. :(
personal မေးတာဘာဖြစ်လဲ...တကယ်တမ်းပြောကြေးဆို အဲဒီလိုလူတွေကလည်း Celebrity Gossip, Scandal တွေဖတ်ချင်တာပဲ...
Media တွေကပရိသတ်ကို ဆွဲထည့်တာမဟုတ်ဘူး....ပရိသတ်တွေကရောစိတ်မ၀င်စားလို့လား...ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ဦး...
ထက်ထက်မိုးဥိးဘက်က ပါချင်တိုင်း Media ကိုအပြစ်မပြောပါနဲ့...
လူကြီးကိုအကာအကွယ်ယူတာကတော့ အရမ်းအကြည်းတန်တဲ့ Manner ပါ။ အဲဒါကတော်တော် စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ်။
Media ကိုEthic မရှိဘူးဆိုရင်....ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားတဲ့
ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ အပြုအမူကမှ လူတစ်ယောက်မှာအခြေခံရှိသင့်တဲ့ Etiquette မရှိတဲ့ စိတ်ပျက်စရာ အပြုအမူပါ...
ဒီပဲယင်းမှာ လက်သံပြောင်ခဲ့တဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီက
ထက်ထက်မိုးဦးအား ရန်ကုန်မြို့ တော် ကြံ့ဖွတ်ပါတီအမျိုးသမီးအမတ်လောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံမည်ဆိုလျှင် အမှုအနိုင်ပေးမယ်လို့မဲဆွယ်စည်ရုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကြံ့ဖွတ်ပါတီ အမျိုးသမီးအမတ်လောင်း ထက်ထက်မိုးဦးသည် လက်သံပြောင်သဖြင့် အခုကဲ့သို့အထူးအခွင့်အရေးပေးကာ အမတ်လောင်းအဖြစ်လျာထားခံရခြင်းဖြစ်ပြီး -အကယ်၍ သူမက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းကို ငြင်းဆန်ပါက ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်ကြိမ်ဒဏ် တမျိုးမျိုးကို ကျခံရမည်ဖြစ်သည်ဟု သတင်းထွက်နေပါသည်။
(ကြိမ်ဒဏ်ဆို အလုံးကြီးကြီးမှ သင့်တော်ပါမည်။အာင်အားကောင်းသဖြင့် သေးလျှင်မဖြုံပါ။ကြိမ်လုံးကို လှမ်းဆွဲကာ ရိုက်ချိုးပစ်နိုင်၍ ဖြစ်ပါသည်။)
ဆရာ လူထုစိန်ဝင်း ပြောတဲ့ စကားကို ကိုညီလင်းဆက် အဓိပ္ပါယ် ကောက်တာ လွဲနေတယ် ထင်ပါတယ်။ သူပြောချင် တာက Celebrity နာမည်ကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်နေရင် သူ့အကြောင်း လူစိတ်ဝင် စားတာ သဘာဝ ပါပဲ။ သူကောင်းတာ လုပ်လုပ်၊ မကောင်းတာ လုပ်လုပ် လူစိတ်ဝင် စားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မကောင်းတဲ့ သတင်း ဆိုရင် လူပိုပြီး စိတ်ဝင်စား ပါတယ်။ လျို့ဝှက်တဲ့ ကိစ္စဆို ပိပြီး သိချင်ပါတယ်။ ဈေးထဲက ငါးစိမ်းသည် တစ်ယောက် လင် ၃ ယောက် ယူတဲ့ သတင်းဟာ ရပ်ကွက်ထဲက အတင်း ပြောချင်တဲ့ မိန်းမ တစ်စုလောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံကျော် မင်းသမီး လင် ၃ ယောက် ယူတာ ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး စိတ်ဝင်စား ပါတယ်။ မီဒီယာဟာ ဦးဆောင် ရမယ်။ စတုတ္တ မဏ္ဍိုင် ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတာထက် လက်ရှိ အချိန်မှာ လူထု သိချင်တာ ဖော်ပြနိုင် ရမယ် ဆိုတာက လက်တွေ့နဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။ လူထုကို ဆွဲမထည့်နဲ့လို့ မျက်နှာပြောင် တိုက်ပြီး ပြောရဲတဲ့ သူတွေကိုတော့ အံ့သြပါရဲ့။ (မင်းသမီး အကြောင်း စိတ်မ၀င် စားရင် ဘာကြောင့် ဒီစာမျက်နှာမှာ လာဖတ် နေပါလိမ့်နော်)။ ဒီတော့ ဆရာ ဦးစိန်ဝင်းက ကိုယ့်အကြောင်း လူစိတ်ဝင်စားတာ မခံချင်ရင် နာမည် ကြီးအောင် မနေနဲ့လို့ ဆိုချင်တာပါ။ နာမည် ကြီးရင်တော့ ကိုယ့်အကြောင်း စာမျက်နှာမှာ သေချာပေါက် ပါမှာပါပဲ။ ကောင်းတာပဲ ရွေးထည့်ပြီး မကောင်း တာလေး ရှောင်ပေးပါလို့ ပြောလို့ မရတဲ့ ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်တော် ပြောတာကို ကိုညီလင်းဆက် နားလည် မယ် ထင်ပါတယ်။
ရှာရလွယ်အောင်လို့ ညီမဘလော့မှာ လင့်ထားခွင့်ပြုပါလို့...ခွင့်ပြုမယ်ထင်လို့ ခုကစပြီး လင့်ထားပါတယ်... အကြောင်းတခုခုကြောင့် မလင့်စေချင်ရင်လဲ ပြောပါ။ ပြန်ဖြုတ်ပေးပါမယ်ရှင့်...
အခု စာပေနဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ ကြီးက ၀င်ပြီး ဖြန်ဖြေ
ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အခါမှာ သူ့ ရဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှုကို
ကတော့ ထက်ထက်ပိုလွန်သွားပါပြီ ။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားပေါ်လွင်ပိုင်နိုင်
မြန်မာမိန်းကလေးချင်း ကိုယ်ချင်းစာနိုင်စေချင်တယ် ။
ဇော်ပိုင်မိန်းမကို ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မေးတော့ ( သူကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မှာဖြစ်ပေမယ့် )
ရဲ့ အဆင့်အတန်းကိုပြသွားတာပါ ။ နောက်ကြောင်းရှင်းတာ..တစ်လင်တစ်မယားဖြစ်တာ..
တွေကြောင့်လည်းသူ့ စိတ်ထဲ သူ့ ကိုဖိနှိပ်မေးတယ်
မထင်တာလည်းပါတာပေါ့ ။ ထက်ထက်က..
နာမည်ကြီးရာမှာတောင် အိမ်ထောင်ရေးသတင်းက တွဲ
ပါပြီးကြီးခဲ့တာမို့ မေးစရာဖြစ်ခဲ့တာဘာဆန်းလို့ လဲ ။
သူ့ အပြုအမူက သူ့ ဘ၀ဟာ Desperate ဖြစ်
ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပါ ။ ထက်ထက်ကိုသဘောကျတဲ့အခြေခံရှိပြီးသားသူပါ ။
စာနယ်ဇင်းနဲ့ လဲ ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူး ။
ပရိသတ်ဆိုတာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ မင်းသမီးကို အပြစ်ကင်းစင်သူ Angelလေးလိုထင်မှတ်ကြတာပါ ။
ရုန့် ရင်းကြမ်းတမ်းသူအဖြစ်တွေ့ ရတာ ...
If Htet Htet will participate in election,I will vote her. Because,She is cute. :P
နာမည်ကျော် တရုတ်စောင် ပြောင်ကြီးသည် တစ်ခုသောဧည့်ခံပွဲတွင် ချီးပန်းဒေး စွာကျယ်မှ ချာနယ်ဇင်း သမား ဝက်ကြီး အားကိုက်လွတ်လိုက်ရာ နားရွက် နှင့် အမြီးစုတ်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။ သတင်းအစုံ အလင်မှာ
ဝက်ကြီး။ ။ ပြောင်ကြီးရဲ့ နှလုံးရောဂါ အခြေအနေ
ပြောင်ကြီး။ ။ ခုတော့ ဘောင်းဘီဆိုဒ်ပြောင်းလိုက်တာကောင်းသွားပါပီ။
ဝက်ကြီး။ ။ ညကများသွားတယ်ဆို
ပြောင်ကြီး။ ။ မဖြေမရစေနဲ့ကွယ်..ခုတောင် ရင်ပူနေပီ
ဝက်ကြီး။ ။နောက်ဆုံး အိမ်ထောင်နဲ့ ဘယ်လိုတွေ့တာလဲ
ပြောင်ကြီး ။ ။ ပြောမရစေနဲ့ကွယ်
ဝက်ကြီး။ ။ ခုလို ဘဝကို ပြန်ပြန်စတာ ဘယ်လိုခံစားရသလဲ
ပြောင်ကြီး။ ။ တော်တော့ တော့ ကွာ..
ဟုဆိုကာ ဝက်ကြီး အထွက်တွင် .. ခုငါယူထားတာ နင့်အမေဟဲ့ဟု ဆိုကာ မအေပေးရွှေသွေး ဟုပြော၍ ကိုက်ရှာလေသတည်း
ထက်ထက်လဲမမှားဘူး အေးသူစံလဲမမှားဘူး အချိန်တန်ရင် ပုံမှန်ဖြစ်သွားမှာပါ။
မှားသွားတာက ညီလင်းဆက်ပါ သူ့ကိုယ်သူအရမ်းအထင်ကြီးနေတဲ့ စိတ်က သူ့ကိုမိုက်ရိုင်းစေခဲ့တယ်
ကျေးဇူးတရားနဲ့ပါတ်သက်လို့် သူပြောတဲ့အတိုင်းဆို ဘယ်သူ့ကိုမှကိုကျေးဇူးတင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့...
ဒါတွေပြောနေရင်ကြာပါတယ် ....ကျုပ်မေးချင်တာ တစ်ခုဘဲရှိတယ် ....ခင်ဗျားကိုမွေးလာတဲ့ မိဘတွေရော ကျေးဇူးရှိကြရဲ့လားဗျာ...သူတို့ကိုရော ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူလို့ ခင်ဗျားထင်ရဲ့လား...
နောက်တစ်ခုက blogger (နာမည်ကျော်)
ူတွေကို ကျနော်မေးချင်တယ် ခင်ဗျားတို့ blogger အချင်းချင်း သူဘာရေးရေး သူ့ဘက်ကထောက်ခံ
အားပေးရမယ်လို့ ပဋိညာဉ် ရှိပါသလား၊
စဉ်းစဉ်းစားစား လုပ်ပြီး အမှန်ကိုထောက်ခံသလို မှားနေတဲ့နေရာကိုလဲထောက်ပြစေချင်ပါတယ်။
ကျော်နှင်းစေလွန် .. သုံးသပ်ပေးဒါ တော်တော် ကောင်းပါတယ်
ဘလော့ကို ဘာဖောင့်နဲ့ ရးတာလဲ
စာလုံးတွေ ကောင်းကောင်း ဖတ်လို့ မရဘုး
stupid နဲ့ anger နဲ့ ယှဉ်ရင် anger က ပိုရိုင်းတယ်တဲ့လား..... lol
ထက်ထက်မိုးဦးကို အရင်က အားမပေးခဲ့ သလို နောင်လည်း အားပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ အခုကိစ္စမှာ လည်း ထက်ထက်မိုးဦး ဘက်က မနေသလို မီဒီယာ တွေ ဘက်ကလည်း မနေပါ။ အခု အင်တာဗျူးမေးတဲ့ အချိန်မှာ ထက်ထက်မိုးဦး ကိစ္စဟာ အရင်နှစ်တုန်းကလို လုံးဝ စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားသိပါတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦး လို လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်လိုက် မှန်ပါတုန့်ပြန် ပေ့မယ်။ မီဒီယာ အနေနဲ့ တော့ စိတ်လိုက်မှန်ပါ တုန့်ပြန်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒီကိစ္စမှာလည်း ထက်ထက်မိုးဦး မှန်တယ်လို့မထင်ပါဘူး။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး မရေးချင်တော့ဘူးဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာ တွေ မှန်ပါတယ်။ မှားတာက ကျုပ်ပါ။
ထက်ထက်ကော အေးသူစံကော သူ့ အတိုင်းအတာနဲ့ သူမှားပါတယ်။သို့သော် အပြစ်မပြောလိုပါ။အားလုံးပုထုစဉ်တွေပဲလေ။ ဒေါသမရှိဘူး အသိတရားမြင့်မားတယ်ဆို ဒါမျိုးဖြစ်မှာကို မဟုတ်ပါ။ အဲ့ဒီ့အတွက် အဓိက ပြောချင်တာက ဘေးက ကာယာကံရှင်မဟုတ်တဲ့ ကျွန်မတို့တွေ အကုသိုလ်မယူသင့်ပါ။
နောက်တခုက ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ သဘောထားကိုလက်မခံပါ။ ကျွန်မ ကတော့ ဆရာသမားတွေကို ရိုသေလေးစားပါတယ်။ ဆရာ့ဂုဏ် သမားဂုဏ်နဲ့ မညီတဲ့လူတွေကို ဆရာ ရယ်လို့ မသတ်မှတ်ပါ။ သို့သော် ဆရာ့ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီတဲ့ ဆရာတွေကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ရဟန်းတွေဆိုလည်းဒီလိုပါပဲ။ ၀ိနည်းသိက္ခာနဲ့ မညီရင်ကို ရဟန်းလို့ကိုမသတ်မှတ်ပါ။ သင်္ကန်းဝတ် လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်။ အကျင့်သိက္ခာနဲ့ညီရင်တော့ ရိုသေလေးစားပါတယ်။ customer တို့ service တို့ ဆိုတဲ့ သဘောတရားကြီးကို သဘောမကျပါ။ အဲ့လိုဆို မေတ္တာတရား ဂရုဏာတရားတွေ ကို ဘယ်နားသွားရှာကြမလဲ။ ကိုယ်က အဲ့လိုသဘောထား သူကလည်းအဲ့လိုသဘောထား တဦးကို တဦး မလေးစားနိုင်တော့ရင် လေးစားမှုပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
ထက်ထက်တို့ ပြသနာမှာလည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လေးစားမှုမရှိလို့ပါ။
ကိုညီလင်းဆက်နဲ့ ကိုမောင်လှတို့ရဲ့ ကျေးဇူးတွေ ကျနော့်အပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေပေါ်ကာစက ဇော်ဂျီဖောင့်အကြောင်း၊ မော်ဇီလာဖိုင်းယားဖောက်စ် အကြောင်းတွေ ရှင်းပြပြီး ဘလော့ဂ်တွေ ရေးသားကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတွေပါ။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုညီလင်းဆက်ရေးတာတွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး။ သူသုံးတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်က နောက်ဆုံးပေါ်နဲ့တူတယ်။ အဲဒါကို ကျနော်လိုက်မပြောင်းသေးတာက သူရေးတာ ကျနော်ဖတ်လို့မရသလို ကျနော်ရေးတာတွေလည်း သူများတွေ ဖတ်လို့မရဖြစ်မှာစိုးတာနဲ့ပါ။ ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့ အခုပို့စ်ကိုတောင် ဖောင့်အခက်အခဲကြောင့် ကုန်အောင်မဖတ်ဖြစ်တော့ပဲ ကွန်မန့်တွေကိုသာ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးဆိုတာက ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ဟောတဲ့တရားထဲကအတိုင်းပြောရရင် “ကျေးဇူးသိမှ ကျေးဇူးရှိပါတယ်” တဲ့။ ကိုညီလင်းဆက်နှင့် ကိုမောင်လှတို့အား ကျေးဇူးတင်လျှက် ယခုစာကို ရေးသားအပ်ပါသည်။
သတင်းထောက် မေးတဲ့ မေးခွန်းက စကားလုံးအသုံးအနှုန်း မကြွယ်ဝဘူး...
ဒါပေမဲ့ သူမများဘူး.. မှန်တယ်..
ထက်ထက်မိုး ကတော့ ရိုင်းတယ် .. အဲလို မေးခွန်းမျိုးအမေးမခံနိုင်ရင် ကို့ကိုယ်ကို ကောင်းအောင်နေ... လူဆိုတာ မှားတတ်ကြတယ် မှားတာလူသိမခံချင်လို့မရဘူး...
ပြဿနာကို စတဲ့သူက သတင်းထောက်မို့ ..
ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်က သတင်းထောက်ပဲ...
မမေးခင်ကတည်းက ဘာမေးမယ်ဆိုတာ ရည်ရွယ်ချက်က ရှိပီးသား... ထက်ထက်မိုးဦးက ရုတ်တရက်အတိုက်ခံလိုက်ရလို့ .. ပါးထရိုက်တာ.. ထက်ထက်မိုးဦးက ဒီလိုတုံ့ပြန်မယ်လို့ ကြိုမတွက်ခဲ့မိဘူးဆိုရင်တောင် .. ပါးထရိုက်မိအောင် ကိုယ်က စမေးခဲ့မိတာဖြစ်နေလို့ .. တရားပြန်စွဲစရာမလိုဘူး...
သူတစ်ပါးစိတ်ထိခိုက်လောက်တဲ့ အမေးမျိုး၊ အရှက်ခွဲတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် .. ပါးရိုက်ခံလိုက်ရရင်တောင် ..ကိုယ့်အမှားကြောင့်မို့ ပြန်တောင်းပန်သင့်တယ်... ... ခုတော့.. သူက တရားတောင် ပြန်စွဲလိုက်သေးတယ်.....
ကိုအောင်မော် Profession ရဲ့သဘာဝကို သေသေချာချာနားမလည် ဘူးလို့ထင်ပါတယ် .. NLS ပြောတာ ပေးသူဘက်(ဥပမာ ဆရာဝန်)က ရှိသင့်တဲ့ သဘောထားကို ပြောနေတာ .. Professional ဟာ ကိုယ်အလုပ်ကိုကျေအောင်လုပ်ဒါပါပဲ ယူသူဖက်(ဥပမာ- လူနာ)ကို ကျေးဇူးမတင်နဲ့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ. ကကျေဇူးတင်တာ မတင်တာ ယူသူရဲ့ Personal ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ် .. အနောက်တိုင်းဆန်တယ် ထင်ရပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ စေတနာပြတ်တယ် ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ် ငါကပေးလိုက်တာ ဒီကောင့်ပေါ်မှာ ငါ့ကျေးဇူးတွေ ရှိတယ်လို့ ပေးသူကယူဆရင် အဲတာလည်းစွဲလမ်းမှု တဏှာတစ်ခုပါပဲ ကာမသုခလ္လိကာနုရောဂါဆိုတဲ့ အစွန်းနဲ့ ညှိပါတယ်.. သံသရာကိုရှည်စေတဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် .. ပစ္စည်းတစ်ခုကို လှူတန်းတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. နတ်ပြည်ကိုရောက်ရပါလို၏၊ ချမ်းသာလိုပါ၏ လို့ ရည်သန်ပြီးလှူတာ သံသရာကို ရှည်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓက အားမပေးပါ .. ပေးကမ်းခြင်းဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာပါပဲ.. ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်စွဲလမ်းစရာမလိုပါဘူး.. ဆရာဝန်ဆေးကုတာ၊ ကျောင်းဆရာ စာသင်တာလဲ ဒီသဘောပါပဲ .. ကိုယ့်တာဝန်ကျေအောင် ကုသ သင်ကြား.. ဒါပါပဲ.. (ဘယ်အရာမဆို) စွဲလမ်းစိတ် ပြတ်ရင် ပြတ်သလောက် ငြိမ်းချမ်းပါတယ်.. စွဲလမ်းရင်စွဲလမ်းသလောက် ပူလောင်ပါတယ် .. ကျေးဇူးတင်သင့်တယ် မတင်သင့်ဘူးဆိုတာ ယူသူ (ဥပမာ- လူနာ၊ ကျောင်းသား) ဘက်က ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် .. လူနာက ဆရာဝန်ကိုကျေးဇူးတင်ရင် ဆရာဝန်ညွှန်းတဲ့ ဆေးကို တိတိကျကျသေသေချာချာသောက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတာကို သေသေချာချာ လိုက်နာ.. အဲတာ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အကျိုးရှိပါတယ် .. ဥပမာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆို ဆရာဝန်ကို ထိုင်ဦးချပြီး ရောဂါသက်သာတယ်ထင်တော့ ဆေးကို Course ကုန်အောင်မသောက်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ရောဂါပိုးတွေဆေးယဉ်တဲ့ ပြသနာဖြစ်.. ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိပါ .. ကျောင်းသားတွေကလဲ ဆရာကို ကျေးဇူးတင်ရင် ထိုင်ကန်တော့ဖို့ မလိုပါ .. ဆရာသင်ပေးတဲ့ပညာကို သေသေချာချာ သင်ကြား၊ ဆရာထက်ပိုပြီး တတ်အောင်လုပ်၊ အခြား သူတွေကိုလဲ လက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားကြ။ ဒီလို ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေ ခြင်းဟာ ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းပါပဲ ..။ ကဲဗျာ. တားမရဆီးမရ ကျေးဇူးပြုသူတွေက ပြုကြဗျာ .. တင်တဲ့သူတွေကလဲ ကျေးဇူးတွေ တင်ကြဗျာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး .. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်လုပ်ဖို့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေဖို့ လိုပါတယ် .. ဒါပါပဲ .
ကိုအောင်မော် Profession ရဲ့သဘာဝကို သေသေချာချာနားမလည် ဘူးလို့ထင်ပါတယ် .. NLS ပြောတာ ပေးသူဘက်(ဥပမာ ဆရာဝန်)က ရှိသင့်တဲ့ သဘောထားကို ပြောနေတာ .. Professional ဟာ ကိုယ်အလုပ်ကိုကျေအောင်လုပ်ဒါပါပဲ ယူသူဖက်(ဥပမာ- လူနာ)ကို ကျေးဇူးမတင်နဲ့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ. ကျေဇူးတင်တာ မတင်တာ ယူသူရဲ့ Personal ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ် .. အနောက်တိုင်းဆန်တယ် ထင်ရပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ စေတနာပြတ်တယ် ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ် ငါကပေးလိုက်တာ ဒီကောင့်ပေါ်မှာ ငါ့ကျေးဇူးတွေ ရှိတယ်လို့ ပေးသူကယူဆရင် အဲတာလည်းစွဲလမ်းမှု တဏှာတစ်ခုပါပဲ ကာမသုခလ္လိကာနုရောဂါဆိုတဲ့ အစွန်းနဲ့ ညှိပါတယ်.. သံသရာကိုရှည်စေတဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် .. ပစ္စည်းတစ်ခုကို လှူတန်းတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. နတ်ပြည်ကိုရောက်ရပါလို၏၊ ချမ်းသာလိုပါ၏ လို့ ရည်သန်ပြီးလှူတာ သံသရာကို ရှည်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ ဗုဒ္ဓက အားမပေးပါ .. ပေးကမ်းခြင်းဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာပါပဲ.. ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်စွဲလမ်းစရာမလိုပါဘူး.. ဆရာဝန်ဆေးကုတာ၊ ကျောင်းဆရာ စာသင်တာလဲ ဒီသဘောပါပဲ .. ကိုယ့်တာဝန်ကျေအောင် ကုသ သင်ကြား.. ဒါပါပဲ.. (ဘယ်အရာမဆို) စွဲလမ်းစိတ် ပြတ်ရင် ပြတ်သလောက် ငြိမ်းချမ်းပါတယ်.. စွဲလမ်းရင်စွဲလမ်းသလောက် ပူလောင်ပါတယ် .